Antony 5 hanamarinana ny fandraisana mpiasa maso ivoho nomerika | Martech Zone
Zoma, Desambra 5, 2014 Douglas Karr
Tamin'ity herinandro ity aho dia namaky lahatsoratra iray avy amin'ny masoivohom-barotra nomerika momba ny antony tokony hanakaranao azy ireo. Ny antony voalohany sy lehibe indrindra dia fahaiza-manao marketing dizitaly. Tsy azoko antoka fa ekeko mihitsy izany rehetra izany - ny ankamaroan'ny orinasa miara-miasa aminay manana departemanta marketing dia manana fahaizana mahatalanjona ary matetika mianatra avy amin'izy ireo izahay tahaka ny ianarany avy amintsika.
birao - ny masoivoho nomerika dia tsy mila miahiahy momba ny politika anatiny, ny resaka teti-bola, ny fanakaramana / ny fandroahana asa, ary ireo faritra ifantohan'ny sain'olona mpivarotra miasa amin'ny orinasa iray. Ny masoivoho nomerika dia karamaina amin'ny tanjona manokana ary mila mahafeno ireo tanjona ireo izy ireo, raha tsy izany dia tapitra ny fifandraisana. Na dia mety handany vola be isan'ora aza ny masoivoho noho ny an'ny mpiasa, ny fotoana lanin'ny fifantohana amin'ny asa an-tanana no mahavaha izany.
Access - nanomboka Highbridge miasa amin'ny mpanjifa am-polony mahery miverimberina, afaka manafatra rindrambaiko orinasa izahay ary manaparitaka ny vidiny amin'ireo mpanjifanay. Rindrambaiko fitaterana tsotra iray anananay fa ny mpanjifanay rehetra dia mitentina dolara an'arivony maro isaky ny seza… fa mividy seza 20 izahay ary manome ny tatitra ho ampahany amin'ny fonosin'ny fifampidinihana.
Results - ny fifandraisanay dia tonga miaraka amin'ny fanamarihana 30 andro tsy misy fanontaniana. Ny mpanjifanay dia afaka miato na mamarana ny fifandraisana amin'ny fotoana rehetra raha tsy mahazo ny valiny ilainy. Raha manakarama ekipa ianao, ny mpampiasa dia tompon'andraikitra amin'ny fanakaramana, fanofanana, fanaraha-maso ary mety fandroahana ilay mpiasa. Miaraka amin'ny masoivohon'ny varotra nomerika dia andraikitr'izy ireo izany fa tsy anao. Raha tsy mahavita azy ireo dia mahita masoivoho hafa ianao nefa tsy misy aretin'andoha rehetra.
fahombiazana - Satria mamolavola paikady amin'ny mpanjifa amin'ny dingana samihafa amin'ny fahasarotany izahay, afaka manadinadinika amin'ny mpanjifa iray izahay ary mamoaka ny paikady amin'ny mpanjifanay rehetra. Manhena ny risika izany ary miantoka ny fanatsarana ny valiny, ny fotoana fohy ary mampihena ny vidiny amin'ny ankapobeny ary mampitombo ny valiny.
banga - Indraindray izahay dia miara-miasa amin'ireo orinasa miavaka amin'ny paik'ady iray na roa, ka ny ezaka ataon'izy ireo dia manosika hatrany amin'ny lalana iray. Raha mpampianatra mailaka ianao dia ny mailaka no miady amin'ny tetikadinao voalohany hamokarana valiny. Tsy manam-potoana hianarana sy hanaovana andrana amin'ny paikady hafa ianao ka apetranao amin'ny toerana fantatrao fa hahazo valiny ianao. Ny fandraisana mpiasa an-tsokosoko dia manome anao fotoana hihazonana ny fifantohanao, fa fantaro ireo banga azon'ny masoivoho nofenoina.
Hubris dia manjaka ao anaty fikambanana lehibe. Miaraka amin'ny loharanom-bola, misy foana ny manontany Maninona isika no tsy afaka manakarama olona fotsiny ary manao izany ny tenantsika? Miaraka amin'ny fanitsiana ny tontolon'ny nomerika ary ny masoivoho tsy maintsy mihodina miaraka amin'ireo fanovana, mijaly amin'ny olana ara-pitaovana ny orinasa, ny fitaovana tsy ampy, ny fizotrany tsy vita ary ny olana hafa ao anatiny izay manakana azy ireo tsy hanatanteraka ny paikady tian'izy ireo hosedraina na ho lavorary.
Ireo atleta lehibe indrindra dia manana zavatra iraisana - manakarama mpikarakara sakafo, Dokotera, manam-pahaizana momba ny hakingana, mpanazatra ary loharano hafa izy ireo hanampiana azy ireo hahatratra ny fahalehibeazana. Ny fandraisana mpiasa maso ivoho nomerika dia afaka manampy anao hitombo haingana kokoa, hampihatra haingana kokoa, ary hamokatra valiny mahavariana izay tsy afaka ampifanarahana anaty. Ny fandraisana maso ivoho dia tokony hanampy ny orinasanao hahatratra ny halehiben'ny varotra nomerika.
Tags: fahafahana misafidymasoivoho nomerikamasoivoho marketing digitalny antonyNahoana
Mar 20, 2015 ao amin'ny 6: PM PM
Te hanao 'hear mandre' aho ary ny ankihiben-tànan'ny lisitra etsy ambony.
Tao amin'ny People Productions, nahita tamin'ny mpanjifanay maro izahay ny fomba nahatongavan'izy ireo taminay, tsy noho ny antony voalaza etsy ambony ihany, fa noho ny fifandraisana aorinay amin'ny tsirairay. Rehefa mandao ny orinasa ny mpanjifa, dia tsy mila manavao ny fifandraisana izy ireo - matetika izy ireo no mitondra antsika any amin'ny orinasa manaraka. Izany dia ahafahan'izy ireo manafoana ny fananganana fitokisana ary afaka manomboka miverina avy hatrany indray isika.
Ity fototra ity dia ahafahantsika mihady paikady sy tetika vaovao miaraka amin'ny orinasa vaovao, ary mampiasa ny fifandraisan'ny asa mba hanafohezana ny làlan'ny fianarana roa an'ny mpanjifa vaovao SY fifandraisana vaovao. Izany koa dia mamela ny mpanjifa ho toy ny kintan'ny rock, mahazo vokatra tsara haingana.